Mukadzi akawanikwa aine mhosva yekushandisa iyo Apple Watch pane vhiri | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch yave chimwezve chishandiso muhupenyu hwezuva nezuva-hwevashandisi vazhinji, kwete chete kuona nguva, asiwo kuona zviziviso zvatinogashira pane yedu iPhone. Nekuuya kweWatchOS 5, futi tichakwanisa kushanyira mapeji ewebhu, Uyo mashandiro akawedzerwa, kunyangwe hazvo achienzana.
Mumwe mukadzi weCanada akawanikwa aine mhosva yekutyaira achitarisa Apple Watch yake. Sekureva kwemutungamiriri wemigwagwa akabhadharisa mukadzi uyu, aibvunza Apple Watch uye achitaurirana nayo achityaira, zvisinei, mutyairi anosimbisa kuti akangomubvunza kuti aone nguva.
Mupurisa wemumugwagwa akamisa mutyairi pamwenje mutsvuku, apo wakaona kupenya kwechinhu chemagetsi mumotokari yako. Robhoti payakashanduka kuita green, mota mbiri dzaive mberi kwavo dzakaenda kumberi asi yake yakaramba yakamira kudzamara mapurisa abatidza mwenje wemota yake.Ipapo ndipo mapurisa paakamumisa kuti amupe tikiti. Sezvo isu tichigona kuverenga mukati The National Post:
Victoria Ambrose akasungwa parobhoti muSouth Ring Road kuGuelph muna Kubvumbi apo mupurisa weUniversity of Guelph, akamira padivi pake, akaona kupenya kwechinhu chemagetsi. Mumiriri akapupura kuti akamuona achitarisa kumusoro uye pasi kanokwana kana, akapupura mudare.
Mwenje pawakasvibira, mota mbiri pamberi paAmbrose dzakamhanya dzichienda kumberi, asi akaramba akamira kusvikira mupurisa abatidza rambi mumotokari yake uye ndipo paakatanga kutyaira zvakare, dare rakanzwa.
Mutemo wemigwagwa mumigwagwa yeOntairo unorambidza kutyaira "wakabata kana kubatanidza mudziyo wekutaurirana usina waya neruoko." Kunyangwe mupomeri akataura kuti aingotarisa nguva, mutongi akaramba humbowo achiti kutarisa nguva, zvinongotarisa kamwe chete, kwete akati wandei. Uye zvakare, mutongi akataura kuti iyo Apple Watch kuti kunyangwe iri saizi, mwero wekutsauswa waive wakaenzana neiyo mbozhanhare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Mukadzi akawanikwa aine mhosva yekushandisa Apple Watch achityaira
Iyi Negative, muverengi wePDF uyo atove nemamiriro erima
Inorova Solo3 uye Powerbeats3 Wireless nemavara matsva muPop Collection